Alimazayo - ukuhlukumeza ubuqotho kwezicubu ezithambile nge ukulimala imithambo yegazi nezinye izimo ezinzima kakhulu - isikhumba kanye nemisipha. Alimazayo is phetho isenzo mechanical emzimbeni ngento blunt (pin noma ehlela phezu kwalo).
Ukulimaza thorax, ngisho ngenkathi sigcina ubuqotho imiphetho, ephelezelwa ubuhlungu okujula, edema, hematomas of kobukhulu ezahlukene obuhlukahlukene. Kusukela amandla nomthelela futhi indlela yokulimala kuncike uhlamvu kanye degree of ukulimala ukubonakaliswa emtholampilo. Contusion kwesifuba kuyingozi ngoba kungasenza siyishaye ukuhlukumeza umsebenzi zenhliziyo umsebenzi ukukhanya. Nge nemihuzuko eqinile kukhona ingozi yokonakalisa wenhliziyo, iphaphu, kanye emaphethelweni ukwa. Uma izicubu liqhumise isitsha esikhulu, ukopha kungenzeka.
Ukuxukuzeka noma contusion thorax okuqukethwe, ngokuvamile uhambisana isimo okunzima isisulu. Kulokhu, kubalulekile ukuxilonga sezingeni ukulimala kwezitho ezingaphakathi, enza isinqumo mayelana nokwelashwa, ngokulandelana sitholakale.
Phakathi ukuhlinzekwa kosizo ngowokuqala isisulu ngokushesha kufanele ushayele i-ambulense! Uxhumane nodokotela wakho mayelana isidingo sokwelashwa akusho ubuhlungu esibhedlela. Ngaphambi kokuza ochwepheshe abathintekayo ukunikeza lokuphumula okuphelele, nibeke cindezela ebandayo ukulimala - kungenzeka esitsheni ngamanzi abandayo noma iqhwa. Izisulu futhi kudingeka anikeze noma iluphi painkiller. Ukunqunywa amabhandeshi Friend lapho elimala esifubeni ngokuphelele contraindicated ukuze ugweme ukulimala yamaphaphu.
Uma izincomo kadokotela alikwenqabeli ukuphuza kungenzeka self-ukwelashwa, izinyathelo ezilandelayo kufanele kwenziwe:
- Ngosuku lokuqala sidinga ukuba aqhubeke egxilisa cindezela abandayo. Umkhuhlane kuzosiza ukunciphisa ukuvuvukala nemivimbo kanye ubuhlungu kancane akhulule.
- njengoba esigabeni esilandelayo ekwelapheni ukulimala, kungenzeka ukusebenzisa lotion, zokugeza efudumele futhi ukulibopha. Asiza akhulule ichichima nemivimbo hematomas. Cindezela ukusetshenziswa tincture arnica tincture noma uzilungiselele.
Ngo Folk imithi esetshenziswa imali eningi yokwelapha nemivimbo ukuvuvukala. Omunye futhi elalidume kunawo wonke - Yebo, umhluzi kwamakhambi. Infusions of ukhova futhi esikweyoku futhi ube nomphumela eqeda ukuvuvukala. Ukuze nemihuzuko yi ezinhle bayicabange yokugcoba nge nomphumela eqeda ukuvuvukala ngaphandle isenzo ukufudumala, kanye ikhethelo labantu, ukulimala. Umthelela okhilimu kanye yokugcoba ngenxa yokuthi izinto zabo asebenzayo akhulule ukucasuka kwezicubu, ukunciphisa ukuvuvukala, ukulimaza ukukhuthaza resorption. Ngaphezu kwalokho, yokugcoba eziningi eqeda ukuvuvukala nethonya analgesic. Ubuhlungu okufanele uhambe ngayo mayelana Ngosuku lwesine emva ekuqaleni ukwelashwa. Uma kungaqali - ukuze ngokushesha uxhumane udokotela.
Umphongolo kancane olimele akusho ingozi wokuphila kwabantu, akuyona ephelezelwa ukubonakaliswa emitholampilo ezinzima futhi, kuhambisana ukuphumula futhi ukwelashwa okufanelekile, isisulu ngokushesha ubuyela ekuphileni kwakhe okuvamile. Uma ukulimala enkulu nejulile, udinga usizo olukhethekile. Ilinyazwe esifubeni eyingozi yezinkinga zayo: ngezinye izikhathi kuze ukuhlinzwa.
Ukuvimbela imiphumela enjalo sina ongakwenza: Gwema izimo ezingase yokulimaza, futhi, njengoba besho, "musa ukukhuphuka eselwa!" Uma usuvele wathola esifubeni olimele, benza konke abangakwenza ukuze ukulimala akusho kungaholela emiphumeleni engathí sina! Landela yonke imithetho enakekela abagulayo, uma kunesidingo, thumela isisulu esibhedlela.
Zinakekele futhi obathandayo! Impilo nempumelelo kuwe zonke izinto.